IChipolo One Spot, enye indlela enhle kakhulu kuma-AirTags | Izindaba ze-IPhone
ULuis Padilla | 10/06/2021 19:20 | Izesekeli ze-IPhone, eziningana
IChipolo isinikeza enye indlela yokuqala yangempela kuma-Apple AirTags ngomkhiqizo, ngentengo ephansi, isinikeza konke okuhle kosesho lwenethiwekhi futhi ingeza amanye amaphuzu ngokuvumelana nayo okwenza kube ukuthengwa okuhle.
Ngesikhathi i-Apple imemezela izindaba zenethiwekhi yeBusca, uChipolo wayengomunye wemikhiqizo eyaqala ukuyijoyina. Mhlawumbe akwaziwa, kepha lo mkhiqizi ubesemhlabeni wamalebuli we-locator iminyaka, futhi leyo minyaka yesipiliyoni ngokungangabazeki isize ukwethula umkhiqizo oyindilinga ngentengo enhle kakhulu: Chipolo One Spot. Indlalifa yeChipolo One, le lebula entsha isebenzisa ngokunenzuzo inethiwekhi ye-Apple's Search, ngakho-ke inazo zonke izinzuzo zayo: ayidingi uhlelo lomuntu wesithathu; ukusetha okusheshayo nokulula ngaphandle kokubhalisa; sebenzisa amadivayisi wezigidi we-Apple ukuthumela indawo yakho.
1 Imininingwane nokucushwa
2 Inethiwekhi ye-Apple's Search kusevisi yakho
3 Ezinye izindlela zokuyithola
Kancane kancane kune-AirTags yakwa-Apple, le disc encane epulasitiki inebhethri elingashintshwa umenzi athi kufanele lihlale unyaka wonke lisetshenziswa ngokujwayelekile. Ukuyiguqula, kufanele uvule i-disc, alukho uhlelo lokuvalwa oluyinkimbinkimbi, yingakho iqinisekiswe i-IPX5 (imelana nemvula ngaphandle kwezinkinga kepha ayikwazi ukucwiliswa). Ngaphakathi inesipika esincane esivumela ukuthi ikhiphe imisindo efinyelela ku-120dB, kakhulu kune-AirTag, okuthile okubalulekile ukuzithola kusuka phansi kusofa. Nemininingwane emincane, ebukeka sengathi ingenangqondo, kepha ebaluleke kakhulu: inembobo yokuyinamathisela ku-keychain, indandatho esikhwameni sakho noma ubhaka ... Okusho ukuthi nokuba nenani elifana ne-AirTag (30 € vs. € 35 yomkhiqizo we-Apple) ngeke usadinga ezinye izinsiza zokuyisebenzisa, ngakho-ke intengo yokugcina ishibhile kakhulu kuChipolo.
Inqubo yayo yokumisa iqala kusukela ngesikhathi sicindezela iChipolo, okuyenza ikhiphe umsindo omncane okhombisa ukuthi isivele isiyasebenza. Kufanele sivule uhlelo lwethu lokusesha ku-iPhone noma i-iPad, bese uchofoza ku-Objects, sifaka into entsha bese silinda ukuthi idivayisi yethu iyithole. Manje kufanele ulandele izinyathelo ezikhonjisiwe futhi zilula njengokungeza igama nesithonjana ukusibona ngokushesha emephini. Ilebuli izosukela kulo mzuzu ihlotshaniswa ne-akhawunti yakho ye-iCloud futhi ilungele ukusetshenziswa uma kunesidingo.
Uxhumano olisebenzisayo yi-Bluetooth. Asinayo i-chip ye-U1, engavumeli ukuseshwa okuqondile kwama-AirTags, into uqobo engingikholisi ngoba ukusebenza kwayo kuyashintshashintsha. Futhi ayinayo i-NFC, futhi lokhu kuthinta ukuthi uma othile eyithola, ngeke kwanele ukuletha i-iPhone yakhe kwi-chibolo, kepha kuzofanele bavule uhlelo lokusebenza lwe-Search bese baluskena. Kunamaphuzu amabili amancane amabi, elilodwa lawo lingahlinzekwa ngokuphelele (ukusesha okuqondile) kanti elinye liyakwazi ukwenzeka (uhlelo lokusebenza le-Search luyasetshenziswa futhi yilokho kuphela).
Inethiwekhi ye-Apple's Search kusevisi yakho
Ake siye entweni ebalulekile, yini ezokusiza ukuthi uthole into yakho elahlekile ngenxa yeChipolo One Spot: yonke i-iPhone, i-iPad ne-Mac emhlabeni wonke izoba yizimpondo ezizokuvumela ukuthi uthole into yakho elahlekile emephini. Yebo, kuze kube manje lapho ubeka umaki owenziwe waba ngowendawo ubukhawulelwe ukuba ngaphakathi kwebanga le-Bluetooth ukuze uyithole, noma ube nenhlanhla yokuthi umuntu onohlelo lokusebenza olufanayo njengoba udlulile. Manje ngenethiwekhi ye-Apple's Search awudingi noma yini yalokho, ngoba noma iyiphi i-iPhone, i-iPad noma iMac ebuyekeziwe izokutshela ukuthi into yakho elahlekile ikuphi kuphela ngemfuneko yokuba seduze kwe.
Ngalokhu, uma ulahlekelwa yinto ungayimaka njengokulahlekile kuhlelo lokusebenza Losesho, futhi khombisa ukuthi uma othile ethola (noma ngabe engahlosile) bakukwazisa futhi bakubonise yona ebalazweni. Uma ebona ukuthi kukhona okushodayo, angaphinda ayicoshe, avule i-app yakhe ethi Thola abone umyalezo owenziwe waba ngowakho owamshiyela wona ngesikhathi emaka ukuthi ulahlekile, okubandakanya nenombolo yocingo angayishayela ukuze asize alulame. Le nethiwekhi ye-Apple Find uhlelo oluseduze oluphelele oluzokusiza ukuthi uphinde uthole izinhloso zakho ezilahlekile.
Ezinye izindlela zokuyithola
Uma simane siyilahlekela ekhaya, ungayenza ibange umsindo, kusuka kuhlelo lokusebenza le-Search noma ngokubuza uSiri "Ziphi izikhiye zami?" Ngakho-ke ungayilandela ngomsindo uze uyithole. Isikhulisazwi sayo sikhulu kakhulu kune-AirTags, futhi futhi umsindo awuyeki ukudlala uze usebenze, okusebenza kakhulu kunokuhambahamba ubuza uSiri uze uwuthole. Futhi ungacela uhlelo lokusebenza le-Find ukuthi likutshele indlela eya entweni yakho elahlekile uma kwenzeka othile efake isandla ekuyitholiseni ebalazweni.
Futhi kusukela nge-iOS 15 sizoba nenketho yokwaziswa lapho sehlukana nayo, ukuze sikwazi ukugwema ukulahleka. Isaziso sizositshela ukuthi sishiye okhiye bethu, noma ubhaka, futhi singakwazi ukumisa izindawo ezithile "eziphephile" ukuze kuthi uma ulapho ungasazisi Siwushiye ngemuva, ngakho-ke ungashiya ubhakha wakho ekhaya ungatshelwanga ngawo.
Ilebuli yezwi yeChipolo One Spot iyindlela enhle kakhulu ehlukile kuma-Apple AirTags. Yize kungenzeka ukuthi ayinakho ukusebenza okuthile, akubalulekile kangako ukukubhekela, futhi izici zayo nentengo kukwenza kube umkhiqizo ophelele kulabo abafuna ukugwema ukulahlekelwa yizinto zabo ezibaluleke kakhulu ngokusebenzisa izinzuzo zenethiwekhi yokuSesha. UManzana. Kutholakala kuwebhusayithi esemthethweni yeChipolo (isixhumanisi) ye ukubhuka kwangaphambili kwe- € 30 ngeyunithi ngayinye kanye ne- € 100 ngephakethe ngalinye lamayunithi ama-4, ngokuthunyelwa kusuka ngo-Agasti.
Ukubuyekezwa kwe: ULuis Padilla
Ukuzimela konyaka owodwa nebhethri elingashintshwa
Ukumelana kwamanzi ne-IPX5
Usebenzisa inethiwekhi ye-Apple Search
Isipika esifika ku-120dB
Ukungabikho kwe-NFC ne-U1 chip
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » iPhone » Izesekeli ze-IPhone » IChipolo One Spot, okunye okuhle kakhulu kuma-AirTags
Nge-tvOS 15 singangena ngemvume nge-ID yobuso ye-iPhone